साउनको तेस्रा सोमबार, शिव भगवानको पुजा आरधना गरिँदै
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु दैनिक बढिरहेको छ । नेपालमा प्रति एक लाखमा लभभग १६ जनाको मृत्युको कारण सवारी दुर्घटना रहेको तथ्यांकले जनाएको छ । यसो हेर्दा सवारी दुर्घटना त सामान्य कुरा नै भइसक्यो तर , अझ रोचक कु
आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार, यस्तो छ धार्मिक महत्व !
२०७८ साउन ४, साेमबार
काठमाडौं । आज यस वर्षको साउन महिनाको पहिलो सोमबार । हिन्दू नेपाली नारीहरुका लागि आजको दिनलाई विशेष रुपमा लिइन्छ । साउने सोमबारका दिन शिवालयहरुमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको भएपनि यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अधिकांश शिवालयहरुम
किन लगाइन्छ साउन महिनामा हरियो चुरा ? यस्तो छ ऐतिहासिक महत्व
२०७८ साउन १, शुक्रबार
काठमाडौँ । साउनको पवित्र महिना शुरु भएको छ । साउन महिनाको आफ्नै महत्व र विशेषता छ । साउन महिनभरी महिलाले शिवको पुजा आराधना गरेर मनाउने प्रचलन रहेको छ । शिव भक्तको लागि यो महिना खास मानिन्छ । साउन महिनामा हरियो रंगले ठुलो महत्व बोके